Binary Emotions: inounza kwatiri nyowani yekushandisa sisitimu yePi yako | Linux Vakapindwa muropa
Kuburitswa kutsva kweanoshanda masystem eakakurumbira Raspberry Pi SBC bhodhi, iri nezve Linux-based SSOO iyo inotisvitsa isu. Binary Emotions. Kune vazhinji richava zita risingazivikanwe zvachose, asi chokwadi ndechekuti nharaunda iyi yevagadziri iri kutotaurwa nezvayo yakawanda kune mamwe emapurojekiti avo anga achikwezva kune vazhinji vevashandisi vane Raspi. Uye chokwadi ndechekuti ivo havangova chete nehurongwa hwekushanda, asi akati wandei atiri kuzotaura newe izvozvi.
Muchokwadi, akakosha mapeji senge DistroWatch Ivo vakatove vakaisa aya masisitimu pane avo zvinyorwa. Imwe yeaya masisitimu anoshanda ayo Binary Emotions akagadzira ane chinangwa uye chakagadzirirwa kuita rimwe basa. Mazita avanogashira anogona kuvhiringidza vamwe, asi hapana chiri kumberi kuchokwadi. Eya, ngatione izvo rimwe nerimwe remazita rakavanda kumashure kwavo:
Raspberry Dhijitari Signage: Seizvo zita rayo rinoratidzira, iwo mufananidzo weiyo sisitimu yekushandisa yeiyo SD kadhi yePi iyo inotibvumidza isu kuti tishandise madigital signage kana multimedia dijiti signage.
raspberry slideshow- Imwe Linux-based operating system yePi iyo yakagadzirirwa kupa masiraidhi emifananidzo nemavhidhiyo, achivatamba kubva kumafomati akasiyana siyana uye midhiya, kusanganisira Samba, FTP, web server, uye kunyangwe kubva kuUSB drive.
Raspberry WebKiosk: multi-mushandisi sisitimu yakagadzirirwa kushandisa Chromium-based web browser uye bhodhi rinogona kuvhurwa uye kushandiswa zvakananga uye kana tisingade kudzima tisina kuchengetedza chero yakavanzika kana kubhurawuza data, kuremekedza kuchengetedzeka uye kuvanzika.
Raspberry muridziCloud: Chokwadi iwe unotozviziva, zadza plug-uye-play (PnP) mhinduro yeako wega data gore rakavakirwa pane wegaCloud. Iyo inobvumira muridzi wayo kuti achengete data mune yavo gore kana kuti otomatiki backup iyo data.
Mamwe ruzivo mune yepamutemo webhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Binary Emotions: inounza kwatiri nyowani yekushandisa system yePi yako